Maamo (Qaali) oo dacwo ka ah Farmaajo | KEYDMEDIA ONLINE
Maamo (Qaali) oo dacwo ka ah Farmaajo
Ikraan Tahliil hooyadeed ayaa warbaahinta kula hadashay Muqdisho, ra’iisul wasaaraha ayay uga mahadcelisay go’aankii uu shaqada kaga joojiyay Fahad Yaasiin, iyadoona uga digtay Farmaajo in uu is hortaago caddaaladda loo raadinaayo gabarteeda.
MOGADISHU, Soomaaliya - Hooyada dhashay Ikraan Tahliil ayaa uga mahadcelisay Ra’iisul Wasaare Rooble go’aankii shaqo joojinta ahaa ee uu ku sameeyay Taliyihii hore ee NISA Fahad Yaasiin.
Waxay ka dalbatay in uu hore u wado caddaalad u raadinta gabadheeda oo ay tilmaantay in ay ku garab taagan yihiin shacabka Soomaaliyeed.
Madaxweynaha waqtigiisu idlaaday ayay uga digtay in uu hor istaago cadaaladda uu Ra’iisul Wasaaraha u raadinayo gabadheeda, sidoo kalena uusan fiirin saaxiibtinnimada Fahad Yaasiin ee uu eego mas'uuliyadda ka saaran in caddaalad ay hesho Ikraan.
Hadalka ka soo yeeray hooyada Ikraan ayaa imaanaya iyada oo Farmaajo isku dayay in uu garab siiyo Fahad Yaasiin oo laga la’ yahay raq iyo ruux gabar da’ yar ah oo u shaqeyneysay dalkkeeda.